भन्नुको अर्थ पार्टीको योजना, केपी ओलीको चुनौतीमा खरो उत्रिन आईजीपीलाई घानमा पारियो ?
‘एउटै भाषा एउटै भेष, एउटै राजा एउटै देश’ भन्ने महेन्द्रीय परिकल्पना मानिन्छ । गणतन्त्र आइसकेपछि सबै जाति, भाषा, संस्कृतिको साझा पहिचान स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आयो । एमालेले यसको गलत व्याख्या गरेर देशै टुक्र्याउन लागे भनेर राष्ट्रियताको अभियान चलाउन थाल्यो । यो सत्ता छाडेपछिको रियाक्सन हो जस्तो पनि देखिन्छ ?
एक भाषा, एक भेष भन्ने न त्यति बेला भनियो न सरकारी नीति बन्यो । तर पञ्चहरुले यो कुरालाई अगाडि बढाएका थिए । सम्पर्क भाषा र मुख्य भाषा एउटै हो । नेपालका बोलिने सबै भाषाहरुबीचमा सम्बन्ध बनाउने भाषा नेपाली भाषा नै हो । यसरी गइरहेको हुनाले त्यो भाषाको आधारमा पञ्चायती शासनलाई टिकाउनका निम्ति उनीहरुले एउटा भाषा एउटा भेष एउटा राजा एउटा देश ल्याए । उनीहरुले त्यो राजालाई बलियो बनाउनका निम्ति ल्याए । त्यससँग हाम्रो सम्बन्ध छैन ।